Union de Fédérations de l'Océan Indien - Tantara ny Fiangonana Advantista
« NY FIANGONANA ADVANTISTA ARA-PAMINANIANA »
4- Manaiky an’i Jesosy ho Andriamanitra tonga tamin’ny nofo ( 1 Jaona 4 :1,2)
Raha fintinina dia mazava arak’ireo fa ny Fiangonana Advantista no hany tena mahatanteraka ireo fepetra ireo. Ka na ny kajy ara-tantara, na ny toetoetra maha-izy azy dia manondro azy ho ilay Fiangonana marina. Tsy tanteraka na mendrika daholo akory ny ao fa izy no mahatanteraka ireo fepetra sy toetoetra ary kajy ara-paminaniana nomen’ Andriamanitra ao amin’ny Baiboly. Manana hafatra manokana hambara izy dia ny hafatry ny anjely telo (Apok 14 :6-12) izay varavaram-pahasoavana ka hiverenan’ny Tompo am-boninahitra haka sy hanafaka izay rehetra vahoaka niandany taminy mandrakariva.
Nomena an’i Hazen FOSS [ - 1893], tovolahy iray avy any Portland, Maine ireo fahitana ireo herinandro vitsy talohan’ny 22 Oktobra 1844. Nefa dia in-telo no nandavany tsy hanambara izany, satria efa ho avy Kristy tamin’izay ary hentitra izy tamin’ny maha-Millerite azy. Nesorina taminy fanomezam-pahasoavana ka nomena an’i Ellen HARMON telo volana taty aoriana. Tamin’ny Desambra 1844 dia nahare an’i Ellen nanambara ny fahitana mitovy amin’izay naseho azy i William FOY sy Hazen FOSS. Taorian’izay dia tsy hitahita firy intsony i FOY noho ny tsy fitiavany hanelingelina ny asa nampanaovina an’i Ellen HARMON. Nandritra ny taona maro dia nanao am-pahanginana ny asan’ny Pasitora tany ambanivohitra izy. Narary izy ka dia maty.
Ny taona 1848 dia nomena fahitana i Ellen G WHITE ny voka-dratsin’ny kafe - dite -paraky. Notoroiny hevitra ny olona mba hitahiry ny volany ho an’ny asa fa tsy holaniana amin’ireny. Tamin’izany koa no nanomboka nijanona tsy nifoka izy ireo.
1858 : nisy mpivady nitory ny maha-ratsy ny kisoa. Niteraka fizarazarana be ihany izany ka dia nandefa taratasy tany amin’izy ireo Ellen WHITE fa tsy manan-jò hametraka ny fomba fijeriny samirery eo amin’ny fiangonana izy ireo. Raha tian’Andriamanitra hoy izy ny hifadian’ny olony henan-kisoa dia handresy lahatra azy izy ( 1 Testimonies pp. 206-207)
TOKO FAHAROAMBINIFOLO :
NY FANDAMINANA NY FIANGONANA
NY ADVANTISTA REFORME
Nanomboka tany Allemagne izany tamin’ny ady lehibe I. Nihambo ho nandray fahitana ny Président n’ny Union Allemagne atsinanana fa azo atao ny mandray fiandiana sy miady amin’ny andro Sabata. Mafy ny fanakianan’ny maro ireo mpitondra ; koa dia nisintaka ireo. Niaiky ny fahadisoany anefa ireo mpitarika ka dia nifona. Ireo nanakiana sy niendaka kosa anefa dia nentin’ny hambom-po ka lasa namorona ny Fiangonana Advantista Reformée.
Tamin’ny 1852 dia nanomboka nihevitra manokana ny tanora i James WHITE. Tsy lavorary ny fianaran’ny zanaka advantista. Ireo mambra tsy nirona hampiana-janaka fa efa ho avy ny Tompo.. Variana tamin’ny foto-pinoana izay raharahan’olon-dehibe ny mambra. Koa dia navoakany ny « Youth’s Instructor » izay saiky hita ao amin’ny « Messages to Young People » (Message à la Jeunesse) ny votoatiny. Navoakany tamin’io gazety io ihany koa ny lesona ho an’ny ankizy misy toko 19. Nasainy nandoa vola ny Ray aman-dreny mba hamoahana mandrakariva ny gazety.